Usoro - Guangxi G&M Enterprise Management Co., Ltd.
Anyị nwere ikike nnwere onwe nwere ikike na usoro ngwaahịa anyị na usoro mmepụta maka afọ 30, ma nweta karịa patenti iri na abụọ. Teknụzụ anyị dị na ọkwa kachasị na ụlọ ọrụ ụlọ, anyị ebipụtala akwụkwọ agụmakwụkwọ metụtara ya n'ọtụtụ akwụkwọ akụkọ.
N'ime afọ 30 gara aga, ndị otu nyocha anyị na ndị otu mmepe si na 3 ruo 15, ọtụtụ n'ime ha nwere ahụmịhe afọ 20 na ụlọ ọrụ ahụ. Ha enwetala ikikere mba iri na ise maka ụdị ịba uru yana akara ikike 1 maka mepụtara.
Anyị bụ otu n'ime ndị mbụ ngwa nke tupu alloy powders nke ụlọ ọrụ, na akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ, site na mbụ elemental powder na diamond, na-tupu alloy powders na diamond, mgbe ahụ na ngwaahịa Efrata na ngwaahịa anya, anyị nwere mere oké rụzuru na ọnwụ ụkpụrụ na ebu nnyocha na mmepe, na-eme ka ngwaahịa sharpness mụbara ihe karịrị 2 ugboro, elu 50% na ọrụ ndụ. Site 2001 ruo ugbu a, anyị na ihe diamond ịcha hụrụ UM UBARA ogide na-eduga ọnọdụ na anụ ụlọ ahịa.
Enwere isi ihe anọ dị na nyocha anyị dị mma, nke bụ nyocha abata nke akụrụngwa, nyocha nke usoro mmepụta, nyocha nke ngwaahịa emechara, na nyocha ọrụ nlele nke ngwaahịa ndị emechara tupu nnyefe.
Na mgbakwunye, Ngwaahịa niile dị n'okpuru nyocha dị mma, yana usoro mmepụta niile ga-abụ nlekota nke ime.
N'ihi na nke siri ike chọrọ na ngwaahịa mma, niile na ngwaahịa na-enwetara mkpa mba mma asambodo, dị ka QC asambodo, ISO2001 na na.
Onye nyocha R&D anyị
Mr Yang Yongbo, onye na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ngwaọrụ diamond maka afọ 30 site na Ọkt. 22, 1991, na-arụkwa ọrụ teknụzụ na nduzi mgbe niile na frontline.
2005.01.11 ~ Taa
E kenyere Mr Yang ụlọ ọrụ brigade mbụ nke geophysical na-atụ anya nke ụlọ ọrụ nyocha ọhụụ nke ụlọ ọrụ mbụ nke Ministry of Metallurgical Industry, na-arụ ọrụ nke ọma dịka ndị otu ụgbọala (osote onye isi), ụlọ nrụzi ụgbọala (onye isi), ụlọ akwụkwọ ụgbọala (osote onye isi oche); Na 1984, e kenyere Mịnịsta nke ụlọ ọrụ igwe ihe na ndị ọrụ nyocha mbụ nke North China Geological Survey nke China Nonferrous Metals Industry Group Corporation.
Director nke Anyang Feida Industrial Co., Ltd. Diamond Products Factory, Tianjin
Vice President of Technology of Tianjin Feili Superhard Materials Enterprise Group.
Mgbe e mesịrị, enterprise e restructured si North China Geological Survey Bureau na Henan Geological Survey Bureau (Bubdivision) Group, na onwe enterprise etisasịwo.Engaged na diamond ngwaahịa n'ichepụta technology.
Production Factory Director, Guangzhou Changyang Hardware Co., Ltd. (Deputy General Manager), Nanhai Ruilichen Tools Co., Ltd. (General Manager), aku n'ichepụta technology na mmepụta management nke diamond ngwaahịa;
Hebei Bee Ngwá Ọrụ Group Co., Ltd., Chief Engineer, Director nke Research Institute, Teknụzụ ndụmọdụ (ka nọ n'ọrụ), aku ngwaahịa imewe na R & D factory oru ọrụ;
Onye isi njikwa na onye nnọchi anya iwu nke Hebei Shijiazhuang Ruilichen Tools Co., Ltd.
Hebei Hengshui Fuluida Tools Co., Ltd. Onye isi Injinia na Onye Nnochite anya Iwu na-etinye aka na njikwa na njikwa njikwa.
Hebei Shijiazhuang Shuangshi Tools Co., Ltd. Injinia Ngwaahịa
Teknụzụ o mere bụ nke teknụzụ ụlọ ọrụ (ọ bụghị teknụzụ nyocha), yana ọ nwere ọtụtụ ahụmịhe saịtị yana usoro iji dozie nsogbu saịtị na teknụzụ ụlọ ọrụ.
E nwere ise Atụmatụ nke diamond hụrụ agụba factory technology:
1. Metal powder usoro na diamond ruru;
2. Gbaa mbọ hụ na usoro nrụpụta nke akụrụngwa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe (ụlọ ọrụ dị iche iche, akụrụngwa dị iche iche, oge dị iche na mgbanwe usoro);
3. Nhazi ihe (Ike, njupụta, ụcha, egweri wdg);
4. Ojiji nke gburugburu ebe obibi (Ọnọdụ jụrụ oyi nke ikuku ikuku na mmiri jụrụ oyi, ọsọ igwe na ọsọ Linear, Mmetụta ibu oke wdg);
5. Uru ụlọ ọrụ mmepụta ihe chọrọ.
Ekwesịrị ileba anya na teknụzụ ụlọ ọrụ dị n'elu ihe ise 5, ọ nweghị nke ga-efu.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ọrụ aka ma ọ bụ aro, biko kpọtụrụ onye injinia anyị, Mr. Yang.